Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo shaaciyay lix qodob oo ay ku fashilantay dowladda Farmaajo - Jowhar Somali news Leader
Home News Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo shaaciyay lix qodob oo ay ku fashilantay dowladda...
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo shaaciyay lix qodob oo ay ku fashilantay dowladda Farmaajo
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay hoygiisa ku yaalla Muqdisho ayaa sheegay in saddex sano oo dowladda Farmaajo maanta u buuxsantay ay ku fashilantay waxyaabihii loo igmaday ee ay balan-qaaday.
C/raxmaan C/shakuur ayaa shaaciyay lix qodob oo uu sheegay inay ku fashilantay dowladda, sida dhameystirka Dastuurka, dhismaha Ciidamo qaran oo Mas’uuliyadda amniga dalka kala wareega Ciidanka AMISOM oo haatan magan loo yahay, isla markaana ilaaliya Xafiiska Madaxweynaha.
Sidoo kale waxaa uu xusay in dowladdu sidoo kale ku fashilantay qorshaha amniga qaranka ee dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ee dalka looga xoreyn lahaa Al-Shabaab.
Waxaa uu kaloo xusay in dowladdu ku fashilantay dib u heshiisiin guud oo dalka laga hirgeliyo.
C/raxmaan C/shakuur ayaa tilmaamay in dowladda ay suura gelin weyday, isla markaana abuuri weyday jawi wada hadal oo ku aadan wada hadalada Somaliland.
Mr Warsame ayaa sidoo kale caddeeyay in dowladda aysan keenin siyaasad arrimo dibadeed fadhisa, si looga samata baxo loolanka juquraafiga siyaasadda iyo is bedelada adduunka iyo geeska afrika, isla markaana arrinti oo dhan ku soo koobantay shirarka Abiy Axmed, Isaias Afwerki iyo Madaxweyne Farmaajo ee ku aadan iskaashiga dhaqaale iyo is dhex galka.
Inkastoo C/raxmaan C/shakuur diiradda saaray qodobadan oo u badnaa waxyaabihii Madaxweyne Farmaajo ka hadlay intii uu ku guda jiray ololaha hadana waxaa jira waxyaabo kale oo dowladda qabatay, inkastoo amniga uu yahay mid aad uga hooseysa halkii uu Madaxweyne Farmaajo ugu yimid markii uu xilka la wareegay.